Wararka xanta ah ee Apple Watch Taxanaha 8 hagaajinta ogaanshaha hurdada ayaa kor u kacay | IPhone news
Apple waa shirkad inta badan shaqadeeda u hura hal-abuurnimo, laakiin mararka qaarkood waxa ay hawlgelisaa mishiinnada maaliyadeed si ay u eegto shirkadaha kale ee sida fiican u qabta. Tani waxay ku dhacday Beats oo leh Beddit, Shirkadda ku takhasusay la socodka hurdada. Beddit ku biiray Apple 2017kii, ka dibna waxay bilaabeen kormeeraha hurdada ee ugu dambeeyay ee shirkadda 2018. Intaa ka dib ma aysan samayn wax ogeysiis ah oo la xidhiidha shirkadda ilaa hadda ... Apple waxay go'aansatay inay "damiso" Bedit tani waxay yeelan kartaa hal macne oo keliya: Apple waxay isku diyaarinaysaa inay horumariso la socodka hurdada ee Apple Watch Series 8 ee soo socda. Sii wad akhri inaan kuu sheegayno dhammaan faahfaahinta ogeysiiskan.
Waa in la sheegaa in kasta oo ay muddo dheer ka soo wareegtay tan iyo markii Apple ay heshay Beddit (dhab ahaan 5 sano), waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo labada shirkadood ah. Sida aan sheegnay, waxay bilaabeen 2018 Kormeeraha ugu dambeeyay ee Beddit, iyo sidoo kale joojiyay taageeradii Android. Apple waxay sii waday inay ku iibiso Kormeeraha Hurdada ee Beddit ee Dukaamada Apple laakiin hadda waxay joojiyeen khadkan qalabka. Kormeere taas waxay noo ogolaatay inaan si toos ah u cabbirno wakhtiga hurdadeena, naga garaaca wadnaha, ka neefsashada, ka heerkulka y qoyaan qolka jiifka, iyo xataa our cuno. Dhammaan mahad wax yar xariijimaha dareemayaasha oo ay ahayd in aan dhigno joodarigayaga hoostiisa.
Hadda ka dib markii ay "xirid" Warar xan ah ayaa soo baxaya oo dhigaya Apple Watch Series 8 ee soo socda inuu yahay dhaxalka hawlahan. Waxay macno samaynaysaa maadaama Apple Watch uu yahay aaladda dareemayaasha Cupertino heer sare, iyo sidii aan uga wada hadalnay podcast-keygii ugu dambeeyay, dareemayaasha ayaa laga yaabaa inay yihiin jilayaasha cusboonaysiinta soo socota. Waxay noqon doontaa dib-u-cusboonaysiin yar inta badan, laakiin La socodka hurdada ayaa laga yaabaa inay noqoto calanka soo socda ee Apple Watch Series 8. Adiguna, miyaad ku fekereysaa inaad cusbooneysiiso Apple Watch sanadkan haddii aad ku guuleysato dareeme kormeer hurdo oo cusub?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Wararka xanta ah ee Apple Watch Series 8 hagaajinta ogaanshaha hurdada ayaa kor u kacay
Casriyeynta galabnimada: iOS 15.2.1 iyo Beta labaad ee iOS 15.3
WhatsApp waxay ku dhowdahay inay diyaariso ciyaaryahan cusub oo qoraal ah